Otu esi edozi ọrụ ọdịyo anaghị aza na Windows | Nzukọ mkpanaka
Otu esi edozi ọrụ ọdịyo anaghị aza na Windows
Ị bụ onye ọrụ Windows 10 ọ mere gị ọrụ ọdịyo anaghị aza? Dị ka ọ na -adịkarị, nke a na -emekarị dị ka nke a site n'otu ụbọchị ruo na -esote yana ozi niile pc na -enye anyị bụ nke njehie ahụ. Naanị ihe ị na -aghọta bụ n'ihi na ọdịyo dị na PC gị anaghị arụ ọrụ ma ị maghị ihe na -eme. Ọ dịghị ihe na -eme, echegbula na oge erubeghị ịtụba pc gị na ahịhịa. Mana ibido, anyị ga -ekwurịrị ntakịrị gbasara ihe kpatara ọdịda a ji apụta na Windows 10.
Ihe na -eme na njehie a bụ na enyere ya dị ka iwu nkịtị maka ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ọkwọ ụgbọ ala ọdịyo ya mere, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma. Mgbe ị na -emelite Windows 10 anyị na -ahụ na ya na onye ọkwọ ụgbọ ala oge ochie ọ na -agbaji karịa na nke ahụ na -eme ka ụda gwụ gị ma nye gị ịdọ aka na ntị na ọrụ ọdịyo anaghị aza. Ozugbo ị matara ebe nsogbu dị, anyị ga -anwa iji ụzọ dị iche iche anyị na -egosi n'okpuru dozie ya.
Na mbụ anyị ga -anwa iji ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa nke meere anyị, dị ka Windows 10 onye na -akpata nsogbu ma ọ bụ na -awakpo onye njikwa ngwaọrụ na ọkwọ ụgbọala ozugbo. Soro usoro ndị a site na nzọụkwụ wee nwee olile anya na ihe niile ga -edozi.
1 Ngwọta maka ọrụ ọdịyo anaghị aza na Windows 10
1.1 Lelee ntọala nzuzo gị na Windows
1.2 Malite ọrụ ọdịyo Windows
1.3 Wepu ndị ọkwọ ụgbọ ala nke ị wụnyeworo n'ime gị Windows 10 sistemụ nrụọrụ
1.4 Jiri nsogbu nhazi Windows 10
Ngwọta maka ọrụ ọdịyo anaghị aza na Windows 10
Dịka anyị gwara gị, ọdịda a nwere ike isi n'ọtụtụ ihe mana ọ gbadoro ụkwụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala. E nyere anyị njehie ahụ site na Windows 10 onye na -akpata nsogbu na dị ka iwu nkịtị ọ na -agba mgbe Windows nwere nsogbu ịmekọrịta ya na ngwaọrụ ọdịyo nke akụrụngwa, ọ bụ ebe ahụ ka ntụpọ nke ị hụrụ na enyo nyere anyị.
Lelee ntọala nzuzo gị na Windows
Mperi ahụ nwere ike ịbịa, ọ ga -ekwe omume na ọtụtụ ngwa anaghị enweta igwe okwu kọmputa. Iji dozie nke a, ị ga -eso usoro ndị anyị ga -enye gị n'okpuru:
Mbụ pịa bọtịnụ mmalite, Gaa na ntọala ma ozugbo ị banyere menu ntọala ị ga -pịa na taabụ nzuzo. N'ịbụ onye nọrọlarị na nzuzo, ị ga -aga na menu igwe okwu, ọ bụ menu akụkụ wee lelee ma igwe okwu pc gị nwere ike ịbanye na PC gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbanwee ya wee nye ikikere mpụta ka kọmputa gị wee nweta ya. Ọ bụrụ na ọ rụpụtara gị, mgbe ahụ ọ ga -anọ ebe ahụ, ị ​​gaghị elekwa ndị ọkwọ ụgbọala anya ọzọ.
Malite ọrụ ọdịyo Windows
Iji nwee ike ime nke a, anyị ga -ewepụta ihe njikwa iwu. Ị nwere ike mepee ya site na ịpị Windows + R na ozugbo mpio gosipụtara na enyo, pịnye services.msc wee pịa igodo ntinye na keyboard gị ka e nwee ike mepee ndepụta ọrụ Windows. Ugbu a anyị nọ n'ime, ị ga -achọta wee chọta ọrụ ndị a:
Windows Audio Audio Endpoint Builder Plug na Play
Ugbu a gbaa mbọ hụ na ọrụ ndị a niile na -akpaghị aka na taabụ ụdị mmalite yana na ihe niile na -arụ ọrụ nke ọma na -enweghị nsogbu n'ime taabụ ọnọdụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị na -akwado ka ịmalitegharị ha. Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, ọ bụghị na akpaghị aka, anyị na -akwado ka ị pịa ọrụ ahụ ugboro abụọ ka windo mepere ebe ọ ga -enye gị ozi gbasara ya. gaba tinye ya na ọnọdụ akpaka. Hụkwa na ejiri akara msconfig.exe akara ọrụ niile. Mgbe ịmechara ihe a niile, malitegharịa kọmputa gị ka mgbanwe ndị ahụ wee mee.
Wepu ndị ọkwọ ụgbọ ala nke ị wụnyeworo n'ime gị Windows 10 sistemụ nrụọrụ
Mmemme nhicha PC kacha mma
Iji mee nke a, anyị na -akwado ka ị rụnye mmemme mpụga nke na -eme ka ọrụ dị mfe, dịka ọmụmaatụ, CCleaner nke anyị kwuworo maka ya n'oge ndị ọzọ. Ozugbo ị nwere ya, gaa na windo ndekọ nke ị ga -ahụ n'aka ekpe wee nye ya iwu ka ọ chọọ nsogbu niile ọ na -ahụ ndị ọkwọ ụgbọala wee mezie ha.
Ugbu a pịa igodo Windows + R iji welie njikwa ọzọ wee pịnye devmgmt.msc wee pịa igodo ntinye na keyboard gị. N'ụzọ dị otu a, ị ga -ahụ nke ahụ Windows 10 njikwa ngwaọrụ ga -emepe. Ugbu a n'ime akụ dị n'aka ekpe, chọta ma gbasaa ụda, njikwa vidiyo na njikwa egwuregwu na iwepụ onye ọkwọ ụgbọ ala dabara na nke ọ bụla n'ime ha. Mgbe ịmere nke a, a ga -ajụ gị ka ikwenye nwụnye.
Imecha n'otu mpio nke njikwa ngwaọrụ ma ọ bụ njikwa ngwaọrụ Dabere ma ị nwere ya na Bekee ma ọ bụ na i nweghị, gaa na mmemme ma ọ bụ mee ihe wee pịa 'nyocha maka mgbanwe ngwaike' ma ọ bụ 'nyocha maka mgbanwe ngwaike' na Bekee. Mgbe emechara nke a, malitegharịa ọzọ iji tinye mgbanwe niile na sistemụ arụmọrụ.
Jiri nsogbu nhazi Windows 10
Nke a nwere ike ịbụ ụzọ ọzọ dị mma ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị ahapụla ya na njedebe ọ bụ n'ihi na anyị ghọtara na ọ bụ nke ọtụtụ ndị na -eji sistemụ arụmọrụ Windows na -ebu ụzọ ebu ụzọ, ebe a maara ya nke ọma. Ọ nwere ike bụrụ na edozighị ọdịda nke ọrụ ọdịyo anaghị aza naanị site na usoro a dị mfe Windows 10 na -enye anyị.
Iji jiri ihe nrụpụta Windows 10 ị nwere ike pịnye na igbe ọchụchọ "onye na -edozi nsogbu". Na nsonaazụ ọchụchọ na -egosi, pịa doro anya na "nchọpụta nsogbu" ma emesịa họrọ ngalaba ngwaike na ụda. Ugbu a anyị nọ n'ime, ị ga -pịa ọkpụkpọ ọkpụkpọ n'ime mpaghara ụda.
Iji mechaa, ị ga -pịa nhọrọ dị elu na menu ọkpụkpọ ọdịyo ma ọ bụ windo wee kaa akara nke gosipụtara na ala nke mpio ahụ, ọkachasị ka a na -akpọ ya. tinye nrụzi na -akpaghị aka wee kụrụ ọzọ. Ihe onye na -akpata nsogbu ga -eme ugbu a bụ ileba anya na sistemụ ma ọ bụ chọpụta nsogbu ngwaike na ọdịyo na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ọ chọta ihe ọ ga -ajụ gị ka ị nwaa idozi ya ma ọ bụ na ọ chọghị.
Mgbe ịchọta mperi ahụ, pịa tinye ndozi a wee malitegharịa pc ugbu a ka i wee nwee ike itinye mgbanwe ndị nchọpụta nsogbu mere.
Anyị nwere olile anya na ụzọ ndị a niile ga -enyere gị aka idozi njehie nke ọrụ ọdịyo anaghị aza. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ ka dị, gbalịa kọwaa onwe gị na ngalaba nkọwa ka ndị otu Movil Forum nwee ike nyochaa nsogbu a na -ekwu maka na ọ nwere ike ime n'ihi ihe dị iche iche na -agbanahụ nlele mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Windows » Otu esi edozi ọrụ ọdịyo anaghị aza na Windows
Akwụkwọ DNI emebiela: kedu ka esi eme ya ọhụụ?